Ebe a na -ebugharị ebugharị ala akpa ụlọ China na ndị na -ebubata ya EVERGREEN
Akpa akpa dị larịị.Akpa dị larịị, akpa akwụghị ọtọ nwere omimi na ike maka ngwaahịa. Akpa igbe na -enye otu nhọrọ igbe juru eju iji dochie igbe+akpa. Na -enye akụkụ anọ + ogwe ala maka mbipụta mbipụta, akpa igbe na -enye mbelata ọnụ ahịa site na iwepu mkpa maka nkwakọ ngwaahịa abụọ.
Nhọrọ anyị ugbu a gụnyere ihe mgbochi na mgbochi Ala Flat obere akpa nwere uru ndị a:
Akpa akpa dị larịị. Dochie igbe katọn ọdịnala, mana ọ bara ọnụ karịa igbe. Nye elu mbipụta 5, nke a dị mma maka nkwalite ahịa ụwa. Ala ya dị larịị kpamkpam ma enwere ike kpughee akụkụ ya, na -eme ka ọ dị mma maka ịkwakọ ngwaahịa dị arọ.
Iji zute ịdịmma onye ọrụ nke ndị ahịa, enwere ike itinye akpa ala ala / akpa square na mkpọchi mkpọchi, ihe mmịfe mmịfe, valvụ. Ihe Mono PE nwere ihe mgbochi dị elu, Ha bụ ezigbo nhọrọ maka ngwugwu dị ka ntụ ntụ protein, nri anụ ụlọ, agwa kọfị na nut.
Mpempe akwụkwọ Mgbapụta Dị Mfe Agbanwe, Ụdị igbe, na -eme ka ọ na -ebu ọtụtụ mpịakọta mgbe ọ na -ahapụ onye ahịa ya nke ọma. Akpa ndị a na -echekwa ihe dị 30% karịa obere akpa, mana jidekwa oke. Ịnwere ike ịgbakwunye mgbakwunye na obere akpa ala dị larịị, dị ka valvụ, eriri tin, oghere oghere. Akpa ala dị larịị nwere ike imegharị emegharị nke EPP na -ahapụ obere akara ukwu ma na -enye ihe mgbochi dị elu iji mee ka ngwongwo dị ọhụrụ.
Gusset belatara / otu egbugbere ọnụ - na -enye ihe ngosi shelf ka mma karịa gusset mepere emepe, na -enyekwa ohere imechi ụzọ dị iche iche.
N'ime otu ngwugwu, ị nwere ike ịnwe ụdị laminate dị iche iche, maka ịrụ ọrụ, imewe na ike ịnwe windo ngwaahịa.
Ihe ọveraụ .ụ
NriNri oyi kpọnwụrụ
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ akara akara akụkụ 3 enwere ike imegharị ya
Osote: Ndị na -ezipụ ozi